Filana ravinahitra :: Vehivavy maromaro any Koweït mitady lalana hodiana eto Madagasikara • AoRaha
Filana ravinahitra Vehivavy maromaro any Koweït mitady lalana hodiana eto Madagasikara
Manao antso avo. Mangataka amin’ny Filoham-pirenena mba hanome tanana amin’ny fampodiana azy ireo eto an-tanindrazana ireo mpiasa vavy malagasy maromaro miasa any Koweït. Tamin’ny alalan’ny antso amin’ny horonantsary nifanaovan’izy ireo tamin’ny mpilaza vaovao malagasy iray tao amin’ny tambazotran-tserasera “Facebook “ no nanaovan’izy ireo an’izany.
« Betsaka no efa nahafeno antontan-taratasy saingy tsy afaka ny hody an-tanindrazana. Mangataka ny fahatongavan’ny Filoha ho tonga aty Koweït ny talen’ny Masoivohon’i Koweït. Mangataka mba alaina, toy ireo teo aloha koa izahay na dia nisy aza ny tsy nety nataon’ireo rahavavinay efa tafody. Mba jereo izahay fa mafy ny te hody an-tanindrazana », araka ny antsoantson’ny solontenan’ireo vehivavy any an-toerana amin’izao fotoana izao.
Nilaza ho tsy manana pasipaoro ny ankamaroan’ireo vehivavy ireo satria nitsoaka tany amin’ny mpampiasa azy. Iray volana sisa ny fe-potoana hananan’izy ireo amin’ireo antontan-taratasy any am-pelan-tanany. « Miisa dimy amby folo amby zato izao izahay no mivondrona ato amin’ny ivon-toerana fandraisana an’ireo mpiasa mila ravinahitra ato. Betsaka ireo tsy tafiditra satria tsy manam-bola omena an’ ireo tompon’andraikitra. Takian’izy ireo vola izahay hodiana any Madagasikara nefa tsy nahazo karama izahay », araka ny fanampim-panazavana.
Araka ny loharanom-baovao iray avy amin’ny minisiteran’ny Asa, ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy eto Madagasikara dia efa misy ny fanadihadiana mitohy mikasika ny fampodiana an’ireo mpiasa malagasy miasa any ivelany ireo. Loharanom-baovao hafa kosa no nanamarina fa manodidina ny fitopolo ny isan’ireo mpiasa malagasy any Koweït ary tsy ara-dalàna ny taratasin’ny ampahany amin’izy ireo.
Fanarenana fotodrafitrasa :: Miverina ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra